Talking Tom Hero Dash - Run Game 1.1.4.617 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.4.617 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Talking Tom Hero Dash - Run Game
Talking Tom Hero Dash - Run Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အများဆုံးပျော်စရာအဆုံးမဲ့ပြေးသမားဂိမ်းတစ်ခုမှာ! , ကို run ကိုရွှေရနှင့်ကမ္ဘာပြန်ဆောက်ဖို့မစ်ရှင်ဆွေးနွေးတွမ် Join! ဤ action ဂိမ်းကစားခြင်းကြိုးစားပါနှင့်စစ်မှန်သောစူပါဟီးရိုးဖြစ်လာ!
★တစ်ဦးက superhero BE: ဖွယ်ပြောစကားတွမ်ပြောစကား Angela နှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများကိုအားလုံးသငျသညျအပြေးစဉ်ကိုသုံးနိုင်သည်ထားတဲ့အံ့သြဖွယ်ထူးခြားတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရှိသည်။
★ THE raccoon ဂိုဏ်းရှုံးနိမ့်: ကိုရွှေဒင်္ဂါးပြားစုဆောင်းနှင့်အတားအဆီးများရှောင်ရှားအပြင်, သငျသညျအခြို့သောအပိုဆုလာဘ်အဘို့အရက်ကွန်းဝံလည်းထိမှန်နိုင်သည်!
★ WIN Boss တိုက်: လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု-ထုပ်ပိုး raccoon သူဌေးကတိုက်ပွဲတွေလည်းဆွေးနွေးပွဲ Angela ပြီးစကားပြော Hanks Save နှင့်သော့ဖွင့်!
★ Awesome လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ် Run: မိုးမျှော်တိုက်များတို့တွင်အပူပိုင်းလှိုင်းကမ်းခြေနှင့်အတူ, တရုတ်-မှုတ်သွင်းကျေးရွာများမှတစ်ဆင့်နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကန္တာရဘုရားကျောင်းထဲမှာ raccoon Fight ။
★စိတ်လှုပ်ရှားတန့် performance: ဤပျော်စရာဂိမ်းမှာတော့တစ်ဦးချင်းစီအပြေးကမ္ဘာကြီးထူးခြားတဲ့စွန့်စားမှုပါပဲ။ ခရုဇ်သင်္ဘောများတစ်လျှောက်တွင်ဖွင့်ရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုး, ရိန်းအပေါ်လွှဲအကြားခုန်ပေမယ့်ရေကူးကန်များထွက် watch!
★ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်: raccoon ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းကမ္ဘာကြီးကိုသည်သင်တို့အားပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကို clean up နိုင်အောင်သူတို့ကိုပယ်မောင်းထုတ်ရန်သင့်အားဖွင့်ဖွင့်ထားပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏တည်နေရာကိုတက် fixed ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကရက်ကွန်းဝံသူဌေးကရင်ဆိုင်ရဖို့အချိန်ပါပဲ။ သူ့ကိုအနိုင်ယူကြောင့်လာမယ့်အပြေးကမ္ဘာပေါ်ပဲ! ဘာဖြစ်သွားမယ့်? တစ်ဦးကလှိုင်းကမ်းခြေ? ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဗိမာနျတျော?
★သော့ဖွင့်မတ်မတ်: အပိုင်းအစများကအေးမြပြေးသမားမတ်မတ်အပိုင်းအစ Unlock နှင့်လူစွမ်းကောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုစိတ်ကြိုက်။ Dash!
★အခမ်းအနား PLAY: ကြောက်မက်ဘွယ်ဆုများရရှိရန်ကစားနည်းလမ်းသစ်တွေနှင့်ပြည့်စုံမစ်ရှင် Explore ။
သငျသညျတွမ်ရွှေ Run ကိုများနှင့်အခြားအပြေးဂိမ်း Talking ချစ်ကြလျှင်, သင်သည်လည်းသင်၏စုဆောင်းမှုဆွေးနွေးပွဲတွမ်သူရဲကောင်း Dash ချင်တာပေါ့! ဒါဟာမိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်သင့်တော်မယ့်အေးမြပျော်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခမဲ့များအတွက်အကောင်းဆုံး action ကိုအပြေးဂိမ်းတွေထဲက Download နှင့်စူပါဟီးရိုးများကဲ့သို့မထိမခိုက်,
ဒီဂိမ်း app ကိုပါရှိသည်:
- Outfit7 ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ကြော်ငြာမြှင့်တင်ရေး,
- Outfit7 ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့တခြား apps များကိုလင့်ထားသောတိုက်ရိုက်ဖောက်သည်;
- နောက်တဖန် app ကိုကစားရန်အသုံးပြုသူများအားအားပေးဖို့အကြောင်းအရာ Personalisation စာ;
- အသုံးပြုသူများအ Outfit7 ရဲ့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များ၏ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုဖို့ခွင့်ပြု YouTube ကိုပေါင်းစည်းမှု;
- In-app ကိုဝယ်ယူမှုစေရန်အဆိုပါ option ကို;
- (ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်) ဝယ်ယူရန်ပစ္စည်းများကစားသမားရဲ့တိုးတက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးကို virtual ငွေကြေးကိုသုံးပြီး; နှင့်
- အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံသုံးပြီးမည်သည့်အတွက်-app purchase အောင်မပါဘဲ app ကိုအပေါငျးတို့သလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အခြားရွေးချယ်စရာ options များ။
ဓနသဟာယ privacy ကိုမူဝါဒက: https://outfit7.com/privacy/eea/
အမေရိကန် privacy ကိုမူဝါဒက: https://outfit7.com/privacy/
ကမ္ဘာကြီးကို privacy ကိုမူဝါဒအရာကြွင်းလေသမျှ: https://outfit7.com/privacy/
အကောင်းဆုံးသစ်ကိုအရေးယူဂိမ်းများကို 2019 / အခမဲ့ဂိမ်း / Runner ဂိမ်း / ဖွယ်ပြောစကားတွမ် / Outfit7 / ထိပ်တန်းသူရဲကောင်းပျော်စရာ
Talking Tom Hero Dash - Run Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Talking Tom Hero Dash - Run Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Talking Tom Hero Dash - Run Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Talking Tom Hero Dash - Run Game အား အခ်က္ျပပါ
torqmostore စတိုး 8.28k 2.08M
Talking Tom Hero Dash - Run Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Talking Tom Hero Dash - Run Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1.4.617
ထုတ်လုပ်သူ Outfit7 Limited
App Name: Talking Tom Hero Dash - Run Game
File Size: 90.68MB
Release date: 2019-08-08 15:28:33
Talking Tom Hero Dash - Run Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ